ရာသီဥတု ခန့်မှန်း ချက် ဒေသအလိုက် ၃၁-၅-၂၀၂၁ ရက်နေ့ မှ ၁-၆-၂၀၂၁ ရက်နေ့ တိုင်းတွာ ချက် မိုးရွာသွန်း နိုင်တဲ့ မြို့များ…. – Shwe Naung
ရာသီဥတု ခန့်မှန်း ချက် ဒေသအလိုက် ၃၁-၅-၂၀၂၁ ရက်နေ့ မှ ၁-၆-၂၀၂၁ ရက်နေ့ တိုင်းတွာ ချက် မိုးရွာသွန်း နိုင်တဲ့ မြို့များ….
N N | May 31, 2021 | Celebrity | No Comments
၃၀-၅-၂၀၂၁ ရက်နေ့ မှ ၁-၆-၂၀၂၁ ရက်နေ့ အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းရှိ ဒေသများတွင် ဖြစ်ပေါ် နိုင်သော မိုးရွာ သွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်များ
ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီး/ ရန်ကုန် တိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး/ ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီး/ ကရင်ပြည်နယ်/ ကယားပြည်နယ်/ မွန်ပြည်နယ်နှင့် တနင်္သာ ရီတိုင်းဒေသ ကြီးတို့တွင် နေရာစိပ်စိပ်၊
ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်းနှင့် အရှေ့ပိုင်း/ ကချင်ပြည်နယ်/ ချင်းပြည်နယ် တို့တွင် နေရာကျဲကျဲ၊ နေပြ ည်တော်တွင် နေရာ ကွက်ကျား မိုးရွာနိုင်ခြေ ရှိနေပြီး မိုးရေချိန်ပမာဏ (0.1mm – 15.0mm) ခန့်အထိ ရွာသွန်း နိုင်ပါသည်။ ကျန်တိုင်းနှင့် ပြည်နယ် များတွင် အများအားဖြင့် သာယာ နိုင်ပါသည်။
ဧရာဝတီ တိုင်းဒေသကြီး/ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး/ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး/ ကရင်ပြည်နယ်/ မွန်ပြည်နယ်/ တနင်္သာရီ တိုင်းဒေသကြီး/ နေပြည် တော်တို့တွင် နေရာ ကျဲကျဲ၊ ကယားပြည်နယ်/
ရှမ်းပြည်နယ်နှင့် ကချင်ပြည်နယ် တို့တွင် နေရာစိပ်စိပ်၊ ချင်းပြည်နယ်နှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်တို့တွင် နေရာကွက်ကျား မိုးရွာနိုင် ခြေရှိနေပြီး မိုးရေချိန် ( 0.1mm – 15.0mm) ခန့်အထိ ရွာသွန်း နိုင်ပါသည်။ ကျန်တိုင်းနှင့် ပြည်နယ် တို့တွင် အ များအားဖြင့် သာယာ နိုင်ပါသည်။
ကချင်ပြည်နယ်/ ရှမ်းပြည်နယ်နှင့် စစ်ကိုင်း တိုင်းဒေသကြီး အထက်ပိုင်းဒေသ အချို့တွင် နေရာစိပ်စိပ်၊ ကယားပြည်နယ်/ နေပြည်တော်/ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး/ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး/ ဧရာဝတီ တိုင်းဒေသကြီး/ မွန်ပြည်နယ်/
ကရင် ပြည်နယ်နှင့် တနင်္သာရီတိုင်း ဒေသကြီးတို့တွင် နေရာ ကွက်ကျား မိုးရွာနိုင်ခြေ ရှိနေပြီး မိုးရေချိန်ပမာဏ (10mm) ခန့်အထိ ရရှိနိုင်ပါသည် ခင်ဗျာ။ ကျန်တိုင်းနှင့် ပြည်နယ် များတွင် အများအားဖြင့် သာယာ နိုင်ပါသည်။
၁။ အဝါရောင် ဒေသများ – နေရာကွက်ကျား(ရွာရန်ရာ ခိုင်နှုန်း ၃၀ ဖြစ်ပါသည်။)
၂။ အစိမ်းနု ရောင် – နေရာကျဲကျဲ (ရွာရန်ရာခိုင်နှုန်း ၆၀ ဖြစ်ပါသည်။)
၃။ အစိမ်းရင့် ရောင်နှင့် အပြာရောင် ဒေသများ – နေရာစိပ်စိပ်(ရွာရန် ရာခိုင်နှုန်း ၈၀ဖြစ်ပါသည်။)
၄။ လိမ္မော်ရောင်နှင့် အနီရောင် ဒေသများ – နေရာအနှံ့ အပြား(ရွာရန် ရာခိုင်နှုန်း အပြည့် ဖြစ်ပါသည်။)
PTNAVIA METEOROLOGY SERVICE
၃၀-၅-၂၀၂၁ ရက်နေ့မှ ၁-၆-၂၀၂၁ ရက်နေ့တိုင်း တွာချက် မိုးရွာ သွန်းနိုင်တဲ့ မြို့များ
၃၀-၅-၂၀၂၁ ရက်နေ့မှ ၁-၆-၂၀၂၁ ရက် နေ့အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းရှိ ဒေသများတွင် ဖြစ်ပေါ်နိုင်သော မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ ခန့်မှန်းချက်များ
အမြဲ လိုလို မြန်မာ ဆန် ဆန် ဝတ်ပြီး ဆန္ဒမပြ နိုင်တာ ကို နားလည် ပေးဖို့ “မြနှင်းရည်လွင်” ဆို…..
အိပ် ချင်နေတဲ့ မျက်လုံး တွေ ပြူး သွား စေမဲ့ ရွှေရင် အစုံ ရဲ့ အလှတွေ ပေါ်လွင် အောင် ချပြလိုက်တဲ့ ရှင်ယွန်းမြတ်ရဲ့ ဗီဒီယို
သဇင်ဦးရဲ့ ဆက်ဆီကျကျ အမိုက်စား ကောက်ကြောင်း ပုံရိပ်လေးများ……
အင်္ကျီအနီရောင်လေးနဲ့ အရမ်းကို ချစ်စရာ ကောင်းပီး အထာကျကျ လှနေတဲ့ အိချောပိုရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးများ…….